I-China ingangenwa manzi IP44 3w 6w 9w 12w 18w 24w isibane sephaneli esisicaba esihonjisiweyo esijikelezileyo i-ultra ecekeceke encinci ekhokelela kwisilingi yesibane abavelisi kunye nababoneleli | Kasem
I-IP44 3w 6w 9w 12w 18w 24w isibane sepaneli esineflethi esihonjisiweyo sijikelezwe isibane esincinci esincinci esikhokelela kwisilingi sokukhanya
Ubushushu boMbala(CCT): 2700 ~ 6500k, 2700 ~ 6500k
UkuSebenza okuLuminous kwesibane(lm/w): 80
Isimbo soYilo: Yanamhlanje
I-Voltage Input (V): AC85-265V
Isibane esiLuminous Flux(lm): 240
Ubushushu bokusebenza(℃): -15 - 45
Isiqinisekiso: CCC, ce, RoHS, Saa, SASO, VDE
Igama lemveliso: ukukhanya kwepaneli ye-led
Umthombo wokukhanya: I-LED SMD
Igalelo lombane: AC85-265V
Amandla: 3w 6w 9w 12w 18w 24w
• Akukho luphazamiso lweRF, ukukhanya okuqaqambileyo nokuthambileyo, okunokukhusela amehlo akho nengqondo. Igalelo lombane: AC 85V ~ 265V. Ayicimeki.
• Uyilo olucekeceke kakhulu, iphaneli ilayita kanye isilingi efakwe ngaphakathi, yenza isilingi ibe mcaba. Ufakelo olulula, lunokufakwa ngokulula endaweni yokukhanya okuqhelekileyo okuhlaziyiweyo.
• Uyilo lweqokobhe lobunzululwazi. Ilensi ye-LED ekhenkcezayo, i-anti glare kunye ne-scratch resistant. Izindlu ezimagingxigingxi ze-aluminiyam ziqinisekisa ukuxhathisa umhlwa kunye nokutshabalalisa ubushushu obugqwesileyo.
• Ubuhlobo bendalo, ubushushu obuphantsi, akukho mitha ye-IR okanye ye-UV, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ukonga umbane. Iindleko zokulungisa ezisezantsi. Iiyure ezingama-50000 umndilili wobomi obude kakhulu bunciphisa ukuphindaphindwa kwesibane kwaye wonge umzamo wakho wokutshintsha izibane.
• Uluhlu olubanzi lwesicelo: lulungele udonga, isilingi, ihotele, iofisi, ikhaya njl njl. umhombiso kunye nokukhanyisa.
Ukuqalisa ukufakela izibane ze-LED ezihlaziyiweyo, kukho amanyathelo ambalwa asisiseko ekufuneka uwalandele:
1) Gqiba ngokuma kwezibane zakho kwaye uphawule indawo yokukhanya ngakunye kwisilingi yakho.
2) Baleka iingcingo kwindawo yesibane ngasinye.
3) Sika umngxuma kwisilingi yakho ehambelana nobukhulu obucetyiswayo kwiphepha lemveliso.
4) Yenza uqhagamshelo lwakho lwengcingo kwaye ucofe ukukhanya endaweni.
Ukugqiba ngoyilo lwezibane zakho
Uninzi lwabantu lubeka izibane zabo ngokulinganayo ngaphandle komnye zenza ipateni yegridi kwisilingi. Umgama phakathi kokukhanya ngakunye ngokubanzi uxhomekeke kumbane we-LED wokukhanya kwakho. Nantsi imithetho embalwa erhabaxa yesithuba xa usebenzisa izibane njengezikhanyiso zokuqala (ukuba usebenzisa izibane njengokukhanya kwelizwi okanye unezinye izibane kwigumbi lakho, ungazibekela bucala kude):
Ukulungiswa kwe-LED ye-7W (ilingana ne-bulb ye-50W eqhelekileyo): izixhobo ze-7W zibekwe ngokubanzi kwigridi ukuze zibe yi-2'-3' ukusuka kudonga ngalunye kunye ne-4-5' ngaphandle komnye.
Ukulungiswa kwe-LED ye-9W (ilingana nebhalbhu eqhelekileyo ye-65W): Izixhobo ze-9W zidla ngokubekwa kwigridi ngendlela yokuba zibe yi-3' eludongeni ngalunye kunye ne-5-6' ngaphandle kwenye.
I-15W izilungiso ze-LED (ezilingana ne-75-80W yebhalbhu eqhelekileyo): I-15W izondlalwa ngokubanzi kwigridi kangangokuba zibe malunga ne-4-5' ukusuka kudonga ngalunye kwaye malunga ne-6-7' ukusuka kwenye.
I-18W izilungiso ze-LED (ilingana nebhalbhu eqhelekileyo ye-125W): izilungiso ze-18W zidla ngokubekwa kwigridi ukuze zibe ngu-5-6' ukusuka kudonga ngalunye kwaye malunga ne-8-10' ngaphandle kwenye kwenye.
Indlela yokukhetha umbala wezibane?
I-3000K: Isetyenziswa kusapho, iihotele, iivenkile zekofu kunye nezinye iindawo ezifudumeleyo nezimnandi ezifunekayo.
I-4500K: Isetyenziswa ekhaya apho kufuneka umoya wokukhanya omhlophe othambileyo.
I-6000K: Isetyenziswa eofisini, kwindawo yokusebenza, kudederhu lweevenkile nakwenye indawo yorhwebo okanye kwenye indawo apho kufuneka kuqaqambe kakhulu.
Iyasinyameka kunye nokusebenza okuphezulu:Ukukhanya okugungxulwayo kwentaba kuza ne-10% - 100% Smooth triac dimming, iyahambelana noninzi lwee-dimmers ze-LED kwimarike yaseMntla Melika. Izibane ziqaqambe kakhulu, azikhezi kwaye zincwina, zikhusela amehlo. Ukonga amandla ukuya kuthi ga kwi-80% ekusetyenzisweni kwamandla xa kuthelekiswa nezibane zemveli ze-incandescent.
Ukutyeba okuNcinci kakhulu:Ubukhulu besi sikwere sokukhanya okugqithisiweyo yi-1 cm kuphela, ilingana nobukhulu beefowuni ze-Apple ze-1. Sebenzisa ezi zinyusi zokukhanya zigungxule kwisilingi zinike inkangeleko entle egqityiweyo.
Ngaphambili: ukukhanya okukhokelela egadini
Okulandelayo: Izibane ezi-3 ze-Solar Powered iNyathelo izibane zentsimbi engatyiwayo ngaphandle kwezibane zaManyathelo zePatio Stair Auto Onoff
IBhalbhu yokuKhanya okuNgxamisekileyo eHlaziyo yokuPhuma koMbane...